Teknolojia · Jona, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Teknolojia · Jona, 2008
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Jona, 2008
Hongria 30 Jona 2008
Raha izay fahitanay azy dia tena lafatra ny andro voalohan'ny vovonàna 2008-n'ny Global Voices izay tanterahina any Bodàpestà, any Hôngria (mazava ho azy fa tsy arakay maso daholo izay antsipirihan'ny fikarakarana rehetra). Nanomboka tamin'ny teny fampidirana avy amin'i Ethan Zuckerman sy Rebecca MacKinnon izay namorona ny Global Voices, ny andro voalohany, izay nisaorany...
Shhh… Nisokatra ny vovonàna 2008-n'ny Global Voices Citizen Media
Hongria 29 Jona 2008
Raha somary nangingina ny sehatry ny Global Voices izay “indroandroa andro” lasa izay dia satria notaterinay aty Bodàpestà, Hôngria ny 80 amin'ireo mpandrindra, mpanoratra sy mpandikateny hanatrika ny vovonàna miaksika ny fahalalaham-pitenenana, ny fijoroana vaolombelon'ny tsirairay [citizen media, médias citoyens] ary izay toeran'ny vohikala Global Voices amin'ny ireo taona ho...
Afrika : Moa ve efa miasa any Afrika ny seraseram-bola PayPal ?
Afrika Atsimo 24 Jona 2008
Collins Mbalo no manontany ao amin'ny A Nairobian perspective ! [fomba fijerin'ny mponin'i Nairobi iray] raha “efa miasa any Afrika ny seraseram-bola PayPal ?” fampiasa amin'ny Aterineto : I believe that maybe Paypal does not recognize the potential and opportunities available in Africa and it is time we trumpeted this cause...
Tanzania: milina fikarohana avy any Tanzania
Kenyà 08 Jona 2008
White African dia nahatsikaritra tranonkalam-pifandraisana roa vaovao avy any Afrika Atsinanana: “Bongoza dia milina fikarohana natao ho an’i Tanzania. Nanitikitika ahy ny fisainana hoe milina fikarohana iray isaky ny firenena. Ny mahazatra ahy dia ny misaina fa hoe izay milina fikarohana lehibe dia tokony ho azo anaovana ny asa rehetra...
Brezila: Fampidirana ny bloguecast (bolongam-peo)
Amerika Latina 01 Jona 2008
Haitao mampiray aina vahoaka sy onjan-taranaka samihafa ary ny sivana no anisan'ny lohahevitra nobanjinina tamin'ny fandaharana voalohan'ny Bloguecast, fandraisam-peo tontosaina sy ampiroboroboin'ny BlogaIsso [pt]. “ny hamoaka andiany iray isan-kerinandro no tanjona, fa angamba tsy haharitra ela tahaka izany intsony, rehefa mivoatra ny fandaharana. Henoy, mandraisa anjara hanala azy ary dia...